के हो भारतमा विवादित भइरहेको नागरिकता संशोधन विधेयक ? | Ratopati
एजेन्सी । नागरिक संशोधन विधेयक–२०१९ सोमबार लोकसभाबाट पास भयो । अहिले यसलाई उपल्लो सदनमा छलफलको लागि पेस गरिएको छ । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले यो विधेयक संसदको तल्लो सदनमा पेश गरेका थिए ।
केन्द्रको सत्तारुढ दल भाजपाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सदनमा यसबारेमा बहस हुँदा सबै सांसदहरुलाई उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरेको छ । भाजपा सरकारले पहिले नै यसलाई मञ्जुरी दिइसकेको छ ।
यो विधेयकमा लोकसभामा पक्ष–विपक्षमा ठूलो विवाद भयो र राज्य सभामा पनि वहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकमा किन विवाद भइरहेको छ ? यसको पहेलु बुझ्न योसँग जोडिएका स–साना पक्षलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
विधेयकको विरोध गर्नेहरुले यसले धर्मनिरपेक्षताको पनि उल्लंघन गर्ने बताएका छन् । तिनका अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष देशले धर्मको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नहुनेमा, विधयकले मुस्लिम समुदायलाई छुटाएको छ ।
भारतको पूर्वोत्तर राज्य असाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र अरुणाचल प्रदेशमा विधेयकविरुद्ध ठूलो विरोध भइरहेको छ । यी राज्यहरु बङ्ग्लादेशको सिमानासँग जोडिएका छन् ।
ती प्रदेशका दलहरुले केन्द्रको सत्तारुढ दल भाजपाले हिन्दू मतदातालाई खुसी पार्न केन्द्र सरकारले प्रवासी हिन्दूहरुहरुलाई भारतको नागरिकतासहज बनाउन लागेको आरोप लगाए ।
यो विषय सन् २००९ मा सर्वोच्च अदालमा पुग्यो । सन् २०१४ मा अदालतले असाम प्रदेश सरकारलाई एनआरसीको सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन आदेश दियो । यो प्रकारले सन् २०१५ पछि सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया एक पटक पुनः सुरु भयो ।
भारतीय नागरिकता तीन आधारमा खत्म हुन सक्छ :